कुनै थप इटालियन व्यञ्जन त्यहाँ पिज्जा र Lasagna छ जहाँ - सेवई र पनीर भन्दा! यो कि सजिलो हुन सक्छ देखिन्छ? तर यति लामो पास्ता को व्यञ्जनहरु हुन्। पेश विदेशी व्यञ्जन पीटर्सबर्ग उच्च समाजमा भव्य receptions यो वास्तवमा Bulgakov र Potocki उल्लेख भनेर उत्साहित छन्। यो Pushkin गरेको तयार सेवई र पनीर, घरमा र त हामी आफ्नो मित्र यो नयाँ अचम्मको पकवान प्रयास गर्न आमन्त्रण भनेर चिनिन्छ।
तर सेवई र पनीर को सबैभन्दा प्रबल प्रशंसक Nikolay Vasilevich Gogol थियो। इटाली लामो समय बस्ने भएको, त्यो आफैलाई पकाउन गर्न सिकेका छ कि यो पकवान त आदी थियो। यो वास्तवमा को singularity गर्दा सेलिब्रेटीहरू एक जाति पाक टीवी कार्यक्रम संलग्न छन् हाम्रो समकालीनहरूको आकलन गर्न गाह्रो छ। मा Gogol समयमा पेशा महाराज एक nobleman लागि प्रतिष्ठित मानिन्छ थिएन। एकदम, प्राकृतिक धेरै छ जो पास्ता, को इटालियन लेखकहरूले प्रशंसक बीच। र पहिलो तिनीहरूलाई बीच ठूलो Boccaccio, जो दृश्य पास्ता "Decameron" को एक समर्पित।
इटाली मा, सेवई र पनीर - एक पकवान कडाई नियमन छ: अन्य चीज, Parmesan भन्दा अन्य, पहिचान गर्दैन। र पनीर, नाम implies रूपमा - पनीर पर्मा मा गरे। हामी धेरै छरितो पास्ता सबै लगभग कुनै पनि चीज पकाउन सक्नुहुन्छ छन्, त्यसैले यसलाई साँच्चै छैन एक इटालियन पकवान, र धेरै रूसी छ।
रूस मा, पास्ता को लोकप्रियता को XIX सताब्दी, जो इटालियन प्रविधि संग गरिहाले पहिलो पास्ता कारखाना, र नुस्खा निर्माण गरिएको छ जब को अन्त गर्न आए। सोभियत संघ मा उत्पादन जो कि उत्पादन, शायद, पास्ता सकिन्छ पनि euphemistically निर्माताहरु यो सेवई भनिन्छ। तर सोभियत कुक पकाउने पास्ता, नाविकता को दृष्टि से सार्थक सरलीकृत embodiment Bolognese।
सेवई र पनीर इटालियन "Carbonara" मा
तपाईं प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ कि मान्य carbonara हुनेछ पकवान को सफलता स्पेगेटी सस समय र इच्छुकता को संयोग छ। स्पेगेटी कसरी खाना पकाउनु सबै थाहा छ, यो एउटा मात्र नियम सम्झना गर्न आवश्यक छ: यो डाइजेस्ट भन्दा राम्रो पाकेका छ।
तेल हल्कासित, कटा बेकन तलना, एक प्लेट मा यो बदलाव को अन्डा yolks थप्न Parmesan, एक सानो Boiling पानी र मरिच grated। सबै राम्ररी मिश्रित। तयार स्पेगेटी चाँडै, लुगा धुने, बिना पकवान गर्न तातो स्पेगेटी सस thickens संग चटनी संग सिफ्ट र पनीर पग्लियो छ।
मा रूसी पग्लियो पनीर संग पास्ता
तपाईं एक homogeneous ठूलो छ सम्म margarine 100 ग्राम ढल्छ ¼ कप आटा थप्न र हलचल, तोरी को ¾ चमचा राख्नु र दूध को2कप खन्याउन। मिश्रण फोडा गर्न सुरु गर्दा, एक briketik राख्नु पग्लियो पनीर र गर्मी देखि हटाउन पनीर पूर्ण पग्लियो सम्म। पास्ता सस र पाक लागि कचौरा मा बदलाव तयार, greased पोख्नुहोस्। 190 डिग्री मा आधा एक घण्टा ओवन मा Bake।
सेवई र पनीर कुनै पनि किसिम
पास्ता को 300 G जोश। छाला बाट स्पष्ट तीन मध्यम टमाटर (कार्य सुविधा, एक मिनेट को लागि पानी उम्लिरहेको तिनीहरूलाई ठाँउ) र टुकडे करो। पकाने को अन्त मा वनस्पति तेल मा भुट्नु टमाटर जडीबुटी थप्नुहोस्। एक सस मा शेयर पास्ता, निन्द्रा गर्न grated पनीर र पास्ता को 200 G अंगीठी। गर्मी देखि तीन मिनेट हटाउन छैन। शीर्ष greenery संग सजाउनु।
प्याकेज लेखिएको निर्देशन अनुसार पास्ता पकाउन। दूध गर्मी तोरी,2Tbsp थप्नुहोस्। पीठो, मरिच र नुन को चम्मच। कुक उच्च गर्मी, बाक्लो ठूलो सम्म निरन्तर जगाएर। पनीर को 200 ग्राम अंगीठी र मिश्रण मा खन्याउन। पास्ता सस, छर्कियो पोख्नुहोस् ब्रेडक्रंब संग र नभएसम्म बुलबुले को सतह गर्न चटनी गठन गरिने छैन गर्न 20 मिनेट को लागि 190 डिग्री मा ओवन मा सुखा।
सरल र सस्तो व्यञ्जनहरु सामन।
अतिथि अकस्मात आयो भने: हतार मा केक नुस्खा
Multivarka मा पकाउने चिप्स
Ravioli के हो? ravioli लागि व्यञ्जनहरु
थाई श्रीराचा सस। आफैलाई तयार
Appetizing नास्ता: टमाटर संग भद्रगोल अन्डा
Vico जई मिश्रण - विश्वव्यापी भेद
शब्द, ओपन अफिस र Excel मा वर्ण को संख्या कसरी गणना गर्न
Guld Dzheyson: क्यारियर
Linnet: चरा गायन, चरा प्रारम्भिक
ग्रीष्म मेन्यू: टमाटर र लहसुनसँग फ्रिडप्पल
पेरोल कर: सबै तपाईं सबैलाई जान्नु आवश्यक
किन अलार्म लीन छैन?
सिडनी (अष्ट्रेलिया) - ग्रीन महादेश को मुख्य पोर्ट
एक शास्त्रीय मंजूरी को वैधता के हो? एक शास्त्रीय मंजूरी को वैधता छ ...